တရုတ်ဟော့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး Whiten အစိုဓာတ်ကိုပျားရည်ခန္ဓာကိုယ် lotion စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | yun ယန်
anti-အိုမင်း & အရေးအကြောင်းတွေ
အမှောင်အစွန်းအကွက် & မှိုင်း
အမှောင် Circles & Puffiness
ရုတ်သိမ်း & ကုမ္ပဏီများ & Slim & နှိပ်
နီခြင်း & ထိခိုက်လွယ်မှု
ဝက်ခြံ & ရေနံထိန်းချုပ်ရေး
သွေးရည်ကြည် & အနှစ်သာရ
cleanser & မိတ်ကပ် remover
မျက်စိ & နှုတ်ခမ်းစောင့်ရှောက်မှု
လက် & ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ရှောက်မှု
ဃ, မကျြနှာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဘို့ရေနံထ rosewater နှင့်အတူဆီထ ...
ခရုအဖြူရောင်မုန့်, ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် moisturizer Repair ...
အကောင်းဆုံးရွှေဂျင်ဆင်းပုလဲ Whiten မုန့်, မှောင်မိုက်အစက်အပြောက် ...
ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် 5% 10% ဗီတာမင် B3 niacinamide မျက်နှာ SER ...
အစိုဓာတ်ကို ref များအတွက် Peppermint နေရောင်ကာကွယ်ဆေးမုန့်ဆီ ...
walnut granules မျက်နှာနှင့်ခန္ဓာကိုယ် S ကို exfoliating OEM / လိမ္မော်ရောင် ...
OEM ဗကပ Cream ကာမိတ်ကပ်အရည် foundati ဆုံး ...
အသားအရေ Wat hydrating, HA မျက်နှာအခိုးအငွေ့ toning moisturizing ...
hot ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး Whiten အစိုဓာတ်ကိုပျားရည်ခန္ဓာကိုယ် lotion
GMP, MSDS, FDA က, ISO9001
ဆံပင်ဖယ်ရှားရေး, အာဟာရ, Whiten, ဆန့်ကျင်အိုမင်း, ကုမ္ပဏီများ, ပေါ့, စိုချွေးပေါက် Cleaner
ပျားရည် ခန္ဓာကိုယ် lotion
whitening moisturizer, အာဟာရ,
မုန့် / lotion
1000 ပုလင်း OEM နိုင်ပါတယ်
Iso9001, gmpc, GMP, အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု
နေ့နှုန်း 100000 ကီလိုဂရမ် / ကီလိုဂရမ်
အရေအတွက် (ကီလိုဂရမ်) 1 -5> 5
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (ရက်)7ညှိနှိုင်းရမည့်
ထုတ်ကုန်အမည် Hot Selling Best Quality Whitening Moisturizing Honey ခန္ဓာကိုယ် lotion
glycerinum, ဆိုဒီယမ် hyaluronate, niacinamide, ပျားရည်, ဗီတာမင်အီး, jojoba အမျိုးအနွယ်ကိုရေနံ, Allantoin
လုပ်ဆောင်ချက် whitening moisturizer, အာဟာရ,
ထိရောက်မှု အစိုဓာတ်, အရေပြားအာဟာရအသားအရေစိုဓာတ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, ခြောက်သွေ့နှင့်ကြမ်းတမ်းသောတိုးတက်လာဖို့ကထပ်ပြောသည်။ ရေချိုးနေစဉ်, ကပိုကောင်းတဲ့အာဟာရများနှင့်ပင်အရေပြားအရေကိုချွတ်, အရေပြား၏အိုမင်းနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ကျန်းမာအသားအရေ၏သဘာဝအဖြူနှင့်ကုမ္ပဏီများ restore, အဖြူနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရေပြားကိုစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား မုန့် / lotion
usage ရေချိုးပြီးနောက်, တပ်မက်လိုချင်သောအဧရိယာ၏အရေပြားမှသင့်လျော်တဲ့ငွေပမာဏကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ညင်ညင်သာသာစုပ်ယူသည်အထိ massage ။
MOQ 5kg ထံမှ
ဝန်ဆောင်မှု 1000 ပုလင်း OEM နိုင်ပါတယ်
ကုန်ပစ္စည်းလက်မှတ် Iso9001, gmpc, GMP, အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု
ကွမ်ကျိုးအလှကုန်ပူးတွဲ yunyang ။ , LTD မှ။ တစ်ဦးအလှကုန်ပစ္စည်းအလှကုန်ကုန်ကြမ်း၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါင်းစပ် OEM / လိမ္မော်ရောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, ရေးဆွဲရေးဖွံ့ဖြိုးရေး, အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကိုက်ညီခြင်းန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 100,000 လူတန်းစား GMPC ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံ, အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်တွင်တည်ရှိသည်။ အများအပြားထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများထုတ်လုပ်မှုနှင့် output ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း။ yun yangzhi ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်များအစေခံရန်အခြေခံအဖြစ် core နဲ့အရည်အသွေးကိုအဖြစ်နည်းပညာကြာ!
Q1 ။ ကျနော်တို့ OEM မိန့်လိုပါကအလို့ငှာအရေအတွက်အပေါ်မည်သည့်ကန့်သတ်ရှိပါသလဲ
နိမ့်ဆုံးအမိန့် (MOQ) ရှိပါသလား?
အဆိုပါ MOQ အကြီးအကျယ်သင်ရွေးချယ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများသင်တို့သည်ဤမျှကွဲပြားခြားနားသောနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်သယ်ဆောင်ဘို့အထူးအမိန့်ထုတ်ခံရဖို့ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကျနော်တို့အမြဲယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများပူဇော်နှင့်အကောင်းဆုံးကိုသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်ပစ္စည်းများနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏မျိုးစုံသတင်းရင်းမြစ်သုတေသနပါလိမ့်မယ်။
Q2 ။ ငါသည်ငါ့ထုတ်ကုန်အဘို့အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ပိုင်ဖော်မြူလာ, ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့ကျိန်းသေ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အကြံဥာဏ်များနှင့်ဖော်မြူလာ / ပါဝင်ပစ္စည်းများသတ်မှတ်ချက်များကြိုဆိုပါတယ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ In-အိမ်သူအိမ်သားအရေပြားအထူးကုဆရာဝန်တွေထံမှသင်တို့အကွံဉာဏျပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရေပြားကျွမ်းကျင်သူများကနမူနာ, ပုံသေနည်းစမ်းသပ်ခြင်း, နှင့်အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်တို့အဘို့ပါဝင်ပစ္စည်းများ source ကိုကူညီပေမယ့်သုံးစွဲဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြပြီးသာမြား
Q3 ။ သငျသညျလုံးဝငါသည်ငါ့အပိုင်ထဲမှာရှိသည်တူညီတဲ့ထုတ်ကုန်စေနိုင်သလား?
ပါဝင်ပစ္စည်းများရှိသမျှသည်အများသောကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်ရင်းမြစ်ထားတဲ့နေကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိကျသောရှုပ်ထွေးသောဒြပ်ပေါင်းများမှမြင့်တက်ပေးခြင်း။ အချို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများလည်းအသုံးပြုမှုအတွက်မူပိုင်ခွင့်နေကြတယ်, ကျနော်တို့ပါဝင်ပစ္စည်းများ oof ဤအမျိုးအစားကိုသုံးပါနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်
။ ဒါပေမယ့်အသုံးပြုမှု, အရောင်, အနံ့နှင့်ခံစားသင်လိုချင်သောအရာကိုအလွန်နီးကပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Q4 ။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များကိုမရှိဘူးဆိုပါကကျွန်မလိုဂိုနှင့်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများဒီဇိုင်းကိုတောင်းခံနိုင်မလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ဂုဏ်ယူနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုတည်ဆောက်ရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာ, ထုပ်ပိုးကျွမ်းကျင်သူများနှင့် copywriters အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ ဒါကလိုဂို၏ဒီဇိုင်း, အထုပ်, ကက်တလောက်နှင့် / သို့မဟုတ် website ကိုပါဝင်သည်နိုင်ဘူး။
ယခင်: အာဟာရလက်မုန့် whitening ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် OEM ထုံးစံသံပုရာသံလွင်ဆီ
နောက်တစ်ခု: whitening မျက်နှာမျက်နှာဖုံးတောက်ပတရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအသားအရေခုနစ်မျိုး
OEM ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်ပူ Chamomile အစိုဓာတ်ကိုရောင်း ...
အာဟာရမီတာ whitening OEM ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်အလှအပ ...
sh moisturizing & အာဟာရပူအရောင်းရဆုံး OEM ...
ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်ဓါတ်ကိုပြန်လည်မျက်နှာမြူခိုး, သဘာဝ Wate ...
ဆန့်ကျင်ရှုံ့ hyd များအတွက်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဂျင်ဆင်းမျက်နှာမျက်နှာဖုံး ...
စိတ်ကြိုက်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် Honeysuckle moisturizi ...
အမှတ် 18, အနောက်လမ်း, စတုတ္ထစီးပွားရေးသမဝါယမ, Dali ကျေးရွာ, Taihe မြို့, Baiyun ခရိုင်, ကွမ်ကျိုး
ကုန်ပစ္စည်းများလမ်းညွှန် - အသားပေးထုတ်ကုန်များ- Hot Tags: - Sitemap.xml - amp မိုဘိုင်း
မျက်နှာမျက်နှာဖုံးစာရွက် , Matcha ရွှံ့မျက်နှာဖုံး , စာရွက်မျက်နှာဖုံး , မျက်နှာမျက်နှာဖုံးစာရွက် , whitening Serum, မျက်နှာမျက်နှာဖုံး ,